श्रीमान बिदेशमा देवरसंग अनैतिक सम्बन्ध, न्याए माग्दै जिप्रकामा « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
श्रीमान बिदेशमा देवरसंग अनैतिक सम्बन्ध, न्याए माग्दै जिप्रकामा
काठमाडौं, ३ असोज । सिन्धुपाल्चोककी एक ३५ वर्षीया युवतीका श्रीमान १७ महिना देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया छन् ।
घर नजिकैको देवर नाता पर्नेसंगको सम्बन्धवाट गर्भ रहे पछि उनी अहिले न घरको न घाटको भएकी छन् । श्रीमानले फोन गरेर अब आफ्नो घरमा नबस्न भने । उता गर्भ बोकाएर लामो समय देखि शारिरीक सम्पर्क राख्दै आएका देवर फरार भए । चार महिनाको गर्भ बोकेर ३५ वर्षीया महिलाको बिचल्ली भएको छ ।
एक छोरा र चार छोरीलाई श्रीमतीको जिम्मा लगाएर मलेसिया गएका श्रीमानको झन बेहाल भएको छ । उनी परिवारलाई सुख दिन पांच छोरा छोरी र श्रीमतीलाई छोडेर विदेश हानिएका थिए ।
जेठी छोरी अहिले कक्षामा ८ मा पढ्ने भएकी छन् । छोरा सानो दुई वर्षको मात्र छ । उ आमा बिना एक छिन पनि बस्न सक्दैन । यसरी अप्ठेरोमा परेपछि चार महिनाको गर्भ रहेकी ति महिला आत्महत्या गर्न भन्दै घरवाट हिडिन् तर उनलाई छिमेकीले बचाएर ल्याए । देवर समेत लापत्ता भएपछि उनी न्याय खोज्दै नजिकैको प्रहरी कार्यालय पुगीन् ।
प्रहरी कार्यालयमा उनले आफ्नो बेली बिस्तार लगाइन् । वैशाखदेखि नै छिमेकी देवरसँग यौन सम्बन्ध थियो । जेठ १० गते मेरो महिनावरी रोकियो ।
म सिन्धुपाल्चोकको भोटसीपामा बस्छु । देवर नाता पर्ने युवकसँगको सम्बन्धका कारण म अहिले समस्यामा परेकी छु । ति युवक पनि अहिले फरार छन् । अहिले म न घरको न घाटको भएको छु ।
श्रीमानले केही दिन अघि फोन गरेर मेरो घरमा बस्नु पर्दैन भन्नुभएको छ । अब यो चार महिनाको गर्भ बोकेर म कहाँ जाउँ ? पहिला दिनदिनै फकाउन आउँथ्यो । मेरै घरमा आएर पनि म संग सम्बन्ध राख्यो । अहिले मेरो महिनावारी रोकिएको थाहा पाएपछि देवर नाता पर्ने युवक पनि बेपत्ता भयो । आफैले गल्ति गरेका कारण माइतिमा जाने हिम्मत पनि गर्न सक्दिन । अब म कसरी बाँचु ? उनी अहिले गैरसरकारी संस्थाले संचालन गरेको सुधार गृहमा बसिरहेकी छन् ।
२५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा बुझाएको बहस नोट : धारा ७६को ५ सांसदको विशेषाधिकार (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, १० असार । संसद विघटन रिटका निवेदक पक्षका वकिलहरुले संविधानको धारा ७६ (५) लाई सांसदहरुको विशेष अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने दलिल पेश गरेका छन्।
भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रमसहित चार अर्ब ८१ करोडको बजेट पारित
चितवन, १० असार । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि चार अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजारको बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको छ
गल्ती स्वीकार गरेर आउनुहुन्छ भने ओलीलाई स्वागत गर्नुपर्छ है शेरबहादुरजी : नेता नेपाल
काठमाडौं, १० असार । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गल्ती र कमी–कमजोरी सच्याएर आए केपी ओलीलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार विपक्षी गठबन्धनको
अविरल वर्षात्ले भवन सहित कागजात बगाएकोले मनाङमा बगरमानै नगरसभा !
‘फेक आइडी’ बनाएर अश्लिल शब्द पठाएको आरोपमा एक जना पक्राउ